DR FIDY: Miteraka aretina ny tsy fanaovana famorana.
Lynda ANDRIATSITONTA 0 Commentaire juil 8, 2017
Ara-pahasalamana ny famoran-jaza. Anisany miaro amin’ny aretina avy amin’ny firaisana ara-nofo ity fomba amam-panao ity. Nambaran’ny dokotera Fidy fa manangona loto ny tsitsy raha tsy esorina. Hatramin’ny sabotsy 08 jolay 2017, manao didim-poitra ny Clinique Fidy mandritra ny hetsika fizaham-pahasalamana maimaim-poana.
Ivon-toeram-pampianarana miara-miasa akaiky amin’ny Clinique Fidy ny oniversite Image Appli. Raha liana amin’ny lalam-piofanana momba ny fitsaboana, afaka manome fanazavana bebe kokoa ity farany, eny amin’ny Lapan’ny Tanana ahitana hetsika ny ho an’ny fahasalamana.
‹ CENTRE DE FERTILITE DE MADAGASCAR: Afaka ny hitoe-jaza foana na momba aza.	› SOAMAHAMANINA: Naka ny fitaovana aza no nataon’ireo sinoa.